Imodyuli yokujonga umfanekiso oshushu yeChina iM384 kunye neFektri | UDianyang
Okwangoku, ishishini lamandla lelona shishini lisetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zombono we-infrared thermal. Njengoko eyona ndlela isebenzayo kwaye ikhulile engafumaneki ekufumaneni indlela, umfanekiso we-infrared thermal unokuphucula kakhulu inkqubela phambili yokufumana ubushushu okanye ubungakanani bomzimba, kwaye uqhubeke nokuphucula ukuthembeka kokusebenza kwezixhobo zonikezelo lwamandla. Izixhobo ze-infrared thermal imaging zidlala indima ebaluleke kakhulu ekuhloleni inkqubo yezobuntlola kunye ne-super automation kumzi mveliso wamandla.
Iindlela ezininzi zokuhlola iziphene kumgangatho weemoto zezona ndlela zokuvavanya zingenakonakalisa iikhemikhali zokwaleka. Ke ngoko, iikhemikhali ezigutyungelweyo kufuneka zisuswe emva kovavanyo. Ke ngoko, ngokwembono yokuphuculwa kwendalo yokusebenza kunye nempilo yabaqhubi, kuyacelwa ukuba kusetyenziswe iindlela zovavanyo ezingonakalisiyo ngaphandle kweekhemikhali.
Oku kulandelayo kukwazisa ngokufutshane ngeendlela ezithile zovavanyo olungenakonakalisa imichiza. Ezi ndlela kukusebenzisa ukukhanya, ubushushu, i-ultrasonic, i-eddy yangoku, yangoku kunye nolunye ulonwabo lwangaphandle kwinto yokuhlola ukutshintsha iqondo lobushushu lento, kunye nokusebenzisa umfanekiso we-infrared thermal ukwenza uhlolo olungonakalisiyo kwiziphene zangaphakathi, iintanda, Ukuxolwa kwangaphakathi kwento, kunye nokudibanisa i-welding, i-bonding, i-mosaic defects, ukuxinwa kwe-inhomogeneity kunye ne-thickness of film.
I-infrared thermal imager itekhnoloji yovavanyo engonakalisiyo ineenzuzo zokukhawuleza, ukungonakalisi, ukungadibani, okwenyani, indawo enkulu, ukubonwa kude kunye nokubonwa. Kulula kwiingcali ukuqonda kakuhle indlela yokusebenzisa ngokukhawuleza. Isetyenziswe ngokubanzi kwimveliso yoomatshini, isinyithi, i-aerospace, unyango, i-petrochemical, amandla ombane kunye nezinye iinkalo. Ngokuphuhliswa kwetekhnoloji yekhompyuter, inkqubo yokujonga esweni kunye nokuchongwa kwemifanekiso ye-infrared thermal edityaniswe nekhompyuter iye yaba yinto eyimfuneko yokufumana inkqubo kwiinkalo ezininzi nangakumbi.
Uvavanyo olungenabungozi sisifundo setekhnoloji esetyenzisiweyo esekwe kwisayensi yanamhlanje kunye netekhnoloji. Isekwe kwisiseko sokungonakalisi iimpawu ezibonakalayo kunye nolwakhiwo lwento eza kuvavanywa. Isebenzisa iindlela ezibonakalayo ukubona ukuba kukho ukungabikho (iziphene) ngaphakathi okanye umphezulu wento, ukuze kugwebe ukuba ngaba into eza kuvavanywa ifanelekile, kwaye kuvavanye ukusebenza kwayo. Okwangoku, umfanekiso we-infrared thermal usekwe ekunganxibelelaneni, ngokukhawuleza, kwaye unokulinganisa ubushushu beethagethi ezihambayo kunye neethagethi ezincinci. Ingabonisa ngokuthe ngqo umhlaba wobushushu bezinto ezinesisombululo sobushushu obuphezulu (ukuya kuthi ga kwi-0.01 ℃). Ingasebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokubonisa, ukugcinwa kwedatha kunye nokusebenza ngokuqonda kwekhompyuter. Isetyenziswa ikakhulu kwi-aerospace, isinyithi, oomatshini, i-petrochemical, oomatshini, uyilo, ukhuseleko lwehlathi lendalo kunye neminye imimandla yeDomain.
Ubungakanani: 93.0 ° × 69.6 ° / 4mm
Egqithileyo Imodyuli ye-imaging ye-thermal engapholiyo ye-M256
Okulandelayo: Imodyuli yokucinga ye-infrared thermal ye-M640